Nice : “Tapahina Ny Zioga Maharikoriko”-n’ny Fanatisma sy ny Fahadalàna · Global Voices teny Malagasy
Nice : “Tapahina Ny Zioga Maharikoriko”-n'ny Fanatisma sy ny Fahadalàna
Voadika ny 17 Jolay 2016 9:26 GMT
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, Français
14 Jolay (2014), Nice, Frantsa. Teo amoron-drano ambanin'ny Promenade des Anglais, takariva miaraka amin'ny fianakaviana. Fahafahana, Firahalahiana, Fitoviana! Saripika Flickr an'i Michael Foley (CC BY-NC-ND 2.0)
Tsy misy teny mahalaza ny fangirifiriako sy ny alaheloko taorian'ny fanafihana tao Nice. Tonga hiandrandra ny lanitra ireo lasibatra ary dia any ry zareo ankehitriny. Ilay lanitra izay nazava toko no lasa matroka sy feno ra mandriaka tampoka teo. Indrisy, namely indray ny habibiana. Indrisy fa nivadika ho fotoam-pisaonana indray ireo fotoam-pifaliana sy fahamiramiranana. Indrisy niofo ho fotoam-piparitahana, fandosirana, tahotra ny sao dia tratran'io sariohatry ny fankahalana, fahamaizinan[-tsaina] ary ny habibiana tsy ahitana ny dikan'ny mahaolombelona io indray ny fotoam-piraisankina sy fihaonana manodidina ny sariohatry ny Repoblika sy ny Frantsan'ny Fahazavana.
Tsy maintsy miaiky aho fa ao anatin'ireny fotoam-pisaonana ireny dia mamadika ahy ny peniko ary tsy hitako ny teny ambara. Rendrika tao anatin'ny fahanginana maharikoriko aho hatramin'ny alakamisy alina. Eo anoloan'ny takelaka fotsy tsy manoratra na inona na inona aho. Feno hevitra misaritaka ao an-tsaiko ao. Feno fihetseham-po mihazohazo ao am-poko.
Na izany aza dia manome alalana ny tenako aho hanolotra fanamarihana fototra mety hanampy antsika angamba hahatakatra izay nitranga sy hanorotoro ilay fotoana nampalahelo tamin'iny 14 jolay iny.
Taorian'ireny fotoana nahafatesan'olona maro ireny dia tsy mitsahatra ny mamerina ny fampitam-baovao fa mizaka zom-pirenena roa Frantsay sy Toniziana ilay mpanafika. Avy eo ity farany ity dia hita fa Toniziana monina sy miasa ao Nice. Isaky ny misy ny fanafihana, dia asongadin'ireny fampitam-baovao ireny hatrany ny firenena niavian'ilay na ireo mpanafika. Tsara aloha ny mampahatsiahy fa Frantsay, teraka tany Frantsa, niaina sy lehibe tao Frantsa ary tsy mahalala izay firenena niaviany ankoatra ny anarany, aloha ireo mpanafika tamin'ny asam-pampihorohoroana teo aloha. Ilaina ve ny manonona izay firenena niaviany raha Frantsay izy ireo ?
Androany aho manome alalana ny tenako hanipika fa raha tianareo ny manonona ny firenena niavian'io mpamono olona io fa heverina ho lasibatra voalohany tahaka an'i Frantsa ihany koa i Tonizia eo imason'ny Fanjakana Islamika ary niaritra fanafihan'ny mpampihorohro maro io firenena io hatramin'ny revolisiona tamin'ny 2010. Tsarovinareo ny nitranga tao an-tendrombohitra Chaanbi, ny tao Bardo na ny tao Sousse. Hitanareo fa samy lasibatry ny fahavalo iray ihany isika rehetra.
Kabary manorina iadiana amin'ny ideôlôjian'ny fahafatesana
Hita ho sarotra dia sarotra ny asan'ny mpanao gazety taorian'iny toe-javatra iny. Tsy maintsy mampahafantatra haingana sa mampahafantatra tsara ?
Na ahoana na ahoana, lehibe sy betsaka ny anjara andraikitry ny manampahaizan'i Frantsa sy izao tonolo izao satria ry zareo no voatery hanolotra kabary (resaka) manorina ahafahan'izy ireo mandresy lahatra manoloana ny ideôlôjian'ny fankahalana sy ny fahafatesana izay mihodidina amin'ny saina kelin'ny zanatsika sy ny tanorantsika izay ampirisihana hanolotena hanao maritiora ary zarina ho ao amin'ny fanatisma mahita ny fanamelohana ho fandresena tsara indrindra ary ny fampijaliana ho fomba fanaovantsoa.
Tsy izaho no tsara toerana indrindra hanolo-kevitra sy hanome lesona ny mpanao politika, izay heveriko, tokony hihetsika amin'ny fomba mahomby amin'ny fanomezana kabary tokana sy tsy manampaharoa, dia ny firaisam-pirenena. Mieritreritra manokana an'i Victor Hugo aho, izay nanonona izao tononkalo manaraka izao ho tarigetra taorian'ny niverenany avy any an-tsesintany tamin'ny fotoana nanononana ny Repoblika Fahatelo tamin'ny taona 1870 :
Zavatra tokana ihany no angatahako aminareo, firaisankina! Amin'ny alalan'ny firaisankina ianao no handresy! […] Raha manodidina ny Repoblika isika, miatrika fananiham-bohitra, ary aoka isika ho mpirahalahy, handresy isika. Amin'ny alalan'ny firahalahiana no hanavotantsika ny fahafahana.
Fotoana izao hahatakarantsika fa niova ny « rindrambaikon'ny » mpampihorohoro raha raisina ny voambolan'i Gilles Kepel ary tokony hiova ihany koa ny an'ireo politisiana. Nasaina tao amin'ny France Inter tamin'ny zoma 15 jolay ny ampitson'ny fanafihana tamin'ny alalan'ny kamiao izay nahafatesana olona 84 tao Nice nandritra ny fankalazana ny 14 Jolay, novelesin'ilay manampahaizana momba ny djihadisma ny fahefana politika ao Frantsa, izay araka ny heviny, mbola ilaozana “mifampivazavaza” araka ny mahazatra azy ireo ary tsy mahay miatrika ny fampihororohoana amin'izao fotoana. Andao hiaraka hieritreritra hitadiavana ny fomba tsara «hanapotipotehana tanteraka ity maharikoriko ity» izay mandrahona ny sivilizasionantsika, ny kolontsaintsika, ny zavakantontsika ary izay rehetra tsara sy mihaja ao amintsika.
Tsarovintsika fa olombelona isika
Lavitra ireo fiheverana sy heviteny mamono antsika, mandrovitra antsika ary mety hampisaraka antsika, dia tsarovy fa Frantsay, Toniziana, Kenyana, Éjipsiana, Tiorka, Libaney, Belza isika…. Tsarovintsika fa olombelona ihany isika. Tsarovintsika fa ny fangirifirian'i Marianne [vehivavy famantarana an'i Frantsa] dia fangirifiriantsika. Fa ny fampihorohoroana sy ny fanatisma tsy manavaka fotsy na mainty, miozolomana na kristiana na jiosy, Frantsay na Toniziana, lehibe na ankizy kely. Tsy manana afa-tsy loko tokana ny fanatisma dia ny mena. Manana loko telo ny Frantsay, ny manga, ny mena ary ny fotsy. Moa va tsy fanoharana amin'ny fahasamihafana izany?
Torovana aho, ekeko izany. Averiko indray fa ny soatoavina frantsay miandriana sy lehibe amin'ny alalan'ny soatoavina repoblikana sy manerantany no nodarohana. Tsy manaiky tsy fidiny izany Frantsan'i Montaigne, Voltaire, Montesquieu, Zola ary Camus izany ary tsy ho faty mandrakizay ny fahazavany.
Lasa manana endrika saimbôlika roa ny 14 Jolay ankehitriny. Etsy ankilany izy fahatsiarovana ny revolisiona frantsay nanafaka ny Frantsay tamin'ny tsy rariny, tamin'ny fitondrana tsy refesi-mandidy, tamin'ny fahamaizinan-tsainam-pivavahana. Etsy andaniny izy lasa daty mampahatsiahy antsika fa manana adidy isika hanao amin'ny fomba rehetra hamongorana izany fankahalana izany, izany fanatisma mandrahona antsika sy mangeja antsika izany. Ary tahaka izay nolazain'i Voltaire telonjato taona lasa izay hoe :
Fotoana izao hanapahantsika ity zioga maharikoriko napetraky ny fahadalana tambonin'ny lohantsika ity, izay ahifikifiky ny fisainana amin'ny heriny rehetra; fotoana izao hampanginana ireo fanatika nahazo vola hanambara zava-maharikoriko ireo, sy hamehezana azy ireo hitory ny maoraly avy amin'Andriamanitra, ny rariny ao amin'Andriamanitra, ny fahatsarana maha Andriamanitra azy fa tsy ireo teny terena ho marina nefa tsy mandresy lahatra izay asan'olombelona ihany. Fotoana izao hampiononana ny tany izay nataon'ny mpihinan'olona miova endrika ho mpitondra fifafahana sy mpitsara ho feno ra mandriaka. Fotoana izao hihainoana ny natiora izay efa nihiakiaka an-jatony taona, aza enjehina amim-pahadalana ny zanako. Fotoana izao hanompoana an'Andriamanitra tsy maniratsira azy.
Ho ela velona la Frantsa. Ho ela velona ny Zanak'Olombelona.
3 andro izaySoeda